Afrika -ikhwani (; ; loo soo gaabiyo AU). Luqadaha qaarkoodna waxaa loo soo gaabiyaa UA. Waa urur caalami ah oo ka kooban 55 dawladood oo Afrika ku yaalla. Waxa la aasaasay ururkan 09/06/2002, ka dib markii la baabbi'iyay midowgii ama magacii hore ee uu lahaa ururkan oo ahaa isutagga dawladaha Afrika. Go'aannada ugu waawayn waxaa la qaataa inta lagu jiro shirarka la qabto lixdii biloodba mar. Markaas waxaa ka soo qaybgala madaxda, ra'iisalwasaarayaasha iyo boqorrada. Shirguddoonka guud ee ururku waxaa uu ku yaallaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Midowga_Afrika&oldid=212768"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Juun 2021, marka ee eheed 08:17.